सबिता भन्छिन : आफनो आयु घटाएर पुरुषका लागि किन वर्त बस्ने ? – Complete Nepali News Portal
सबिता भन्छिन : आफनो आयु घटाएर पुरुषका लागि किन वर्त बस्ने ?
July 31, 2017	877 Views
साउन लाग्नासाथ हरियो पहिरन लगाउने देखि हातमा चुरा अनि मेहेन्दी लगाउने प्रचलन बढ्दो छ ।
पछिल्लो समय फेसनकै रुपमा बढदै गएको यो प्रचलमा केही किंवदन्तीहरु जोडिएका छन् ।प्राचीन किंवदन्ती अनुसार मेहेन्दी, हरियो चुरा र ब्रत बस्दा विवाहित महिलाका श्रीमानको आयु बढ्छ भन्ने मान्यता छ । श्रीमतिको लागि श्रीमानले ब्रत बस्न आवश्यक छ कि छैन् ? विवाहित महिलाले यसरी चुरा मेहेन्दी लगाउँदा उनीहरुको सुन्दरता सामान्य भन्दा बढ्ने गर्छ जसले श्रीमानमा श्रीमतीको आकर्षण कायम राख्छ ।
श्रीमती मात्र श्रीमानको अगाडि राम्री बन्नुपर्ने यो कस्तो मान्यता ! श्रीमतिले ब्रत बस्दा स्वास्थ राम्रो हुनुका साथै श्रीमति प्रति श्रीमानको सम्बन्ध प्रगाढ हुने गर्दछ भन्ने मान्यता पनि जनमानसमा छ । मेहेन्दीले पनि स्वास्थमा फाइदा पुर्याउँछ । मेहेन्दीको शीतलताले तनाव, टाउको दुखाई र ज्वरोबाट राहत प्रदान गर्ने मान्यता रहिआएको छ । हातमा मेहेन्दीले नाम लेख्दैमा कोही आफ्नो हुन्छ र ? मेहेन्दी गाढा बस्दैमा माया प्रेम प्रगाड बस्छ र ?
कुनै समय म पनि उसका लागि मेहेन्दी र चुरा लगाउँथे । उसले त अर्कैसँग बिहे गर्यो । आजकल मलाई यी सब चिज भ्रम लाग्छन् र म केही पनि लगाउँदिन म । “ हो । मलाई चुराको आवाज सुनेर झर्को लाग्छ । मेहेन्दीको रङ्ग देखेरै जलन हुन्छ । अचेल बजारमा चलेका अनेक रङ्ग छानी छानी लगाउने चलन जो छ, थरीथरीका चुरा किनेर लगाउने चलन जो छ, ति सबै फिका लाग्छन् ।
‘ आफैँले असाध्यै प्रेम गर्ने मान्छेले त जीवनलाई रङ्गिन बनाउन सकेन, दुई दिनमै उँडिजाने बजारीया रङ्गहरुले कसको जीवन रङ्गिन बनाउन सक्ला र ! लाग्छ की, हामी मान्छे र तिनका व्यवहारमा विश्वास गर्न छोड्छौँ । तिनका व्यवहारलाई बुझ्न सक्दैनौँ तर मान्छेले बनाएका चुरा र रङ्गहरुमा विश्वास गर्छौँ । यो आफैँमा एक भयंकर अन्योलता हैन र ? सोध्नुछ, थुप्रै युवतिहरुलाई जो आफ्नो प्रेमीलाई खुसी बनाउन चुरा छान्दैछन्, रातभर जाग्राम बसेरै हात रंग्याउँदैछन् । तिनका प्रेमीहरु पनि तिनिहरुप्रति प्रतिबद्ध छन् त ?
‘ हरितालिका तीज, कृष्णाष्टमी, औंशी, साउने सक्रान्ति । यस्ता थुप्रै चाडले संस्कृति मात्रै बोक्दैनन् । युवतिहरुलाई सृजनशिल हुने बाटो पनि रोक्छन् । कहिलेकाहीँ त सोच्छु, महिलाहरु लोग्नेलाई खुसी पार्नकै लागि जन्मिएका हुन् त ? आफ्नो आयु घटेको पत्तो छैन, लोग्नेलाई खुसी पार्न उद्यत महिलाहरु देख्दा उदेक लाग्छ ।